Geopois.com - Kedu ihe ọ bụ? - Geofumadas
Julaị, 2020 Geospatial - GIS, innovations
Anyị na Javier Gabás Jiménez kwuru n'oge na-adịbeghị anya, Geomatics na Topography Engineer, Magister na Geodesy na Cartography - Mahadum Polytechnic nke Madrid, na otu n'ime ndị nnọchi anya Geopois.com. Anyị chọrọ iji aka mbụ nweta ihe niile gbasara Geopois, nke malitere ịmara kemgbe afọ 2018. Anyị malitere site na ajụjụ dị mfe, Gịnị bụ Geopois.com? Dịka anyị siri mara na ọ bụrụ n’anyị tinye ajụjụ a na ihe nchọgharị, nsonaazụ ya na ihe a na-eme na ebumnuche nke ikpo okwu, mana ọ bụchaghị ihe ọ bụ.
Javier zara anyị: "Geopois bụ Thematic Social Network on Teographical Information Teknụzụ (TIG), sistemụ ozi gbasara mpaghara (GIS), mmemme na websaịtị". Ọ bụrụ na anyị maara banyere ọganihu dị ukwuu nke teknụzụ nke afọ ndị na-adịbeghị anya, ntinye GIS + BIM, usoro ndụ AEC, nsonye nke ndị nwere mmetụta dịpụrụ adịpụ maka nlekota, na eserese weebụ -nke na-eme ụzọ ya ga-aga n'ihu na desktọpụ GIS- anyi nwere ike nweta echiche nke ebe Geopois na-arutu aka.
Kedu ka echiche Geopois.com si mezuo na onye na-akwado ya?
Echiche a mụrụ na 2018 dị ka blọọgụ dị mfe, enweela m mmasị ide na ịkekọrịta ihe ọmụma m, amalitere m bipụta akwụkwọ nke m na mahadum, ọ na-eto ma na-enwe ọdịdị dị ka ọ dị taa. Onye nwere mmasị na ịnụ ọkụ n'obi n'azụ anyị bụ Silvana Freire, ọ hụrụ asụsụ n'anya, ọ na-asụ Spanish, English, German na French. Bachelor nke Business Business na Master na Nnyocha nke Mmekọrịta Akụ na ụba International; na sava a Javier Gabás.
Gini bu ebum n’uche Geopois?
Mara na enwere ọtụtụ ngwaọrụ na atụmatụ maka iwu / nyocha nke data gbasara ohere. «A mụrụ Geopois.com na echiche nke ịgbasa Geographic Information Technologies (GIT), n'ụzọ dị irè, dị mfe ma dịkwa ọnụ. Nakwa ịmepụta obodo ndị mmepe na ndị ọkachamara na ezinụlọ nke ndị ji ịnụ ọkụ n'obi geo.
Kedu ihe Geopois.com na-enye obodo GIS?
Isi okwu: Anyị ọkachamara na teknụzụ geospatial nwere ọdịnaya dị elu na mmemme na njikọta nke ọba akwụkwọ yana APIS nke ntanetị weebụ, ọdụ data na GIS. Ya na nkuzi n'efu dika ihe di nfe ma dikwa otu esi ekwe ya na otutu teknụzụ TIG.
Mmekọrịta chiri anya karị: Site na usoro ikpo okwu anyị, ọ ga-ekwe omume iso ndị mmepe ndị ọzọ na ndị nwere mmasị na ngalaba ahụ na-ekerịta ihe ọmụma ma zute ụlọ ọrụ na ndị mmepe.
Obodo: Obodo anyị bụ ihe mepere emepe kpamkpam, na-ahụ maka ụlọ ọrụ na ndị ọkachamara na ngalaba ahụ, ndị mmepe geospatial na ndị na-anụ ọkụ na teknụzụ ala.
Nzipụta: Anyị na-eme ka ndị ọrụ anyị niile hụ ya anya, karịchaa ndị ọrụ anyị, na-akwado ha ma na-agbasa ihe ọmụma ha.
Maka ndị ọkachamara GIS, enwere ohere iji nye ihe ọmụma ha site na Geopois.com?
N’ezie, anyị na-akpọ ndị ọrụ anyị niile ka ha kerịta ihe ọmụma ha site na nkuzi, ọtụtụ n’ime ha ebidolarị na-arụsi ọrụ ike ma nwee oke mmekọrịta na anyị. Anyị na-anwa ime ka ndị odee anyị na-ede akwụkwọ, nye ha visibilia kachasị ma nye ha webụsaịtị ọkachamara ebe ha nwere ike ịkọwa onwe ha ma kesaa oke mmasị ha maka ụwa geo.
Nke a na-ekwu, site na nke a njikọ Ha nwere ike banye na web wee bido sonye na Geopois.com, ntinye aka dị ukwuu maka ndị niile nwere mmasị na mpaghara Geo chọrọ ịzụ ma ọ bụ nye ihe ọmụma ha.
Anyị eleela anya na web na-ezo aka "Geoinquietos", Geoinquietos na geopois.com bụ otu?
Mba, otu Geoquiet bu ndi ime obodo nke OSGeo, ntọala nke ebum n’uche ya bu kwado mmepe nke ngwanrọ geospatial mepere emepe, na iji kwado ya. Anyị bụ ikpo okwu nwereonwe nke agbanyeghị na anyị na-ekerịta ọtụtụ echiche, ọdịmma, nchegbu, ahụmịhe ma ọ bụ echiche ọ bụla na mpaghara nke geomatics, sọftụwia na teknụzụ geospatial (ihe ọ bụla metụtara ubi nke GEO na GIS).
You chere na mgbe oria ojoo a gasịrị, ụzọ anyị si eji, ihe, ma na-amụta ewerezi ọnọdụ atụghị anya ya? Ọnọdụ ụwa a ọ nwere mmetụta dị mma ma ọ bụ na-adịghị mma emetụta Geopois.com?
Ọ bụghị nke a dịka oge a na-atụghị anya ya, mana ọ bụrụ na ọ gafegogo n'ihu, ọkachasị agụmakwụkwọ dị anya, mmụta-m na mmụta m, usoro ikpo okwu izizi na ngwa ọdịnala etolitela afọ ole na ole. Ọrịa ọjọọ agbasalarị usoro a. Anyị site na mmalite ahọrọla mgbe niile maka nkuzi na imekọ ihe ọnụ n'ịntanetị, ọnọdụ dị ugbu a enyerela anyị aka ịmụta ime ihe dị iche na ịchọ ụzọ ndị ọzọ nke arụ ọrụ, mmekọrịta na mmepe.
Dabere na ihe Geopois na-enye, na ọbịbịa nke oge dijitalụ nke anọ Consider na-atụle nke ahụ maka nyocha GIS ọ dị mkpa ịmara / mụta mmemme?
N'ezie, inweta ihe ọmụma anaghị ewere ọnọdụ na mmụta mmụta mmemme nwere ike ị baara gị uru. Ọ bụghị naanị na ndị nyocha GIS, mana nye ndị ọkachamara ọ bụla, teknụzụ na ihe ọhụrụ anaghị akwụsị ma ọ bụrụ na anyị lekwasịrị anya n'ọhịa anyị, echere m na ndị injin TIG kwesịrị ịmụta na mmemme site na mahadum na ndị ọrụ ibe ndị ọzọ dị ka ndị na-amụ banyere ala, ịmara otu esi eme mmemme ga-ebuli elu. ọ ga - eme ka ikike ikwupụta ihe ọmụma gị ka mma. Maka nke a, nkuzi anyị lekwasịrị anya na mmemme, mmepe koodu n’asụsụ dị iche iche, yana ijikọ ọba akwụkwọ ọbaakwụkwọ dị iche iche na APIS.
You nwere n'uche ụdị oru ngo ọ bụla ma ọ bụ ijikọ aka na ụlọ ọrụ, ụlọ ọrụ ma ọ bụ nyiwe ugbu a?
Ee, anyị na-aga n'ihu na-achọ ohere maka mmekọrịta nke ọrụ ndị ọzọ, ụlọ ọrụ, mahadum na kọleji ọkachamara. Anyị na-ekere òkè ugbu a na ActúaUPM, mmemme ntinye aka nke Polytechnic University of Madrid (UPM), nke na-enyere anyị aka ịzụlite atụmatụ azụmaahịa iji mee ka ọrụ a dị adị. Anyị na-achọkwa ndị mmekọ nke teknụzụ imekọrịta na mmepe ha na iji nwee ike ịbanye ma mepụta ego na netwọk nke ndị mmepe geospatial.
Onwere ihe gha abia, nke ihe giro ghoro ma obu uzo geeti.com ndi GIS nwere ike iso?
Ee, anyị chọrọ ichere ruo mgbe oge ọkọchị iji bido imepụta mmekọrịta ọzọ n'etiti ndị ọrụ anyị, na-ejide webinars na ihe omume ntanetị. Anyị ga-achọ ịmepụta ihe omume mmepe nke hackathon ọkachamara na teknụzụ geospatial n'ọdịnihu dị nso, mana maka nke a, anyị ka ga-enweta ndị nkwado iji zụọ ya.
Kedụ ihe ị mụtala na geopois.com, gwa anyị otu nkuzi ọrụ a hapụụrụ gị na etu esi etolite etolite n'ime afọ abụọ a.
Ọfụma, kwa ụbọchị, anyị na-amụta nkuzi nke ndị ọrụ mmekọrịta anyị na-ezitere anyị, mana ọkachasị n'ihe niile metụtara mmepe na mmejupụta nke ikpo okwu.
Ma mụ ma Silvana enweghị usoro mmemme, yabụ anyị kwesịrị ịmụpụta azụmazụ na mmemme niile na sava ahụ, data NOSQL dị ka MongoDB, nsogbu niile dị n'ihu na UX / UI lekwasịrị anya na onye ọrụ ahụ, igwe ojii na nchekwa na igwe ojii yana ụfọdụ SEO na Digital Marketing n'ụzọ ... N'ụzọ bụ isi ị nwekwaghị ịbụ ndị Geomatics na GIS Specialist ka onye nrụpụta Stack zuru ezu.
Otu esi arụ ọrụ niile adịla elu ma na-agbadata, dịka ọmụmaatụ, mgbe anyị malitere na 2018 anyị gara site na ịnwale saịtị Google ọnwa ndị mbụ iji mejupụta ihe niile dị na WordPress, anyị chọrọ imejupụta ọtụtụ maapụ ma jikọta ọba akwụkwọ dị iche iche dịka Openlayers, Leaflet, Mapbox, CARTO ... Ya mere, anyị nọrọ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ otu afọ, nwalee plugins na ịma mma iji nwee ike ime obere akụkụ nke ihe anyị chọrọ, anyị kwubiri na ọ naghị arụ ọrụ, n'ikpeazụ na oge ọkọchị nke 2019 na ekele maka ihe ọmụma m nwetara nzere nna ukwu na geodesy na eserese. Site na UPM (Javier) anyị kpebiri ịkwụsị mmekọrịta anyị na onye njikwa ọdịnaya ma mee mmepe niile anyị, site na azụ gaa na n'ihu.
Anyị mepụtara usoro ikpo okwu na ọkara nke abụọ nke 2019 yana na Jenụwarị 2020 anyị nwere ike ịmalite ihe ugbu a Geopois.com, n'agbanyeghị, ọ bụ oru ngo na mgbanwe na-aga n'ihu ma anyị na-anọgide na-eme ihe kwa ọnwa site na enyemaka nke nzaghachi site na obodo anyị, mmụta na mmelite. Ọ bụrụ n’anyị chọta ebe ndị ị na-elekọta mmadụ ka @Geopois Na Twitter, anyị nwere ike ịmara onyinye niile nke nkuzi, ngalaba na ozi ndị ọzọ metụtara ya. Anyị ahụla ọtụtụ isiokwu na-atọ ụtọ, dị ka iji Tiles the Lelet, mkpokọta nyocha gbasara mbara igwe na Turf.
Na mgbakwunye na nkuzi nkuzi, ọ na-enye ohere nke ịchọta onye nrụpụta maka ọrụ oghere gị. Netiwu nke ndi okacha amara, a na-egosiputa ikike ha n’ebe nile di nkenke, ma ebe ha di.
Ihe ọ bụla ọzọ ịchọrọ ịchọrọ ịgbakwunye gbasara geopois.com?
Obi dị anyị ụtọ ịgwa anyị na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ndị mmepe geospatial 150 na Spain, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Estonia, Guatemala, Mexico, Peru na Venezuela abụrụla akụkụ nke obodo anyị, na LinkedIn anyị dị nso na-erute ndị na-eso ụzọ 2000 na anyị enwelarị ndị na - arụkọ ọrụ ọrụ 7 na-ezitere anyị nkuzi dị elu na nke na-atọ ụtọ dị ukwuu kwa izu. Ọzọkwa, anyị jisiri ike gafee usoro 1 nke asọmpi 17 ActuaUPM n'etiti echiche 396 na mmadụ 854. Kemgbe Jenụwarị 2020 anyị agbaala ọnụọgụ ugboro abụọ na nyiwe anyị, yabụ anyị nwere obi anụrị maka nkwado na mmasị anyị na-eweta na mpaghara mpaghara.
Na Linkedin Geopois.com, Ugbu a o nwere ihe dịka ndị na-eso 2000, nke opekata mpe 900 sonyeere na ọnwa 4 gara aga, ebe anyị niile gafere oge mgbochi na mgbochi n'ihi COVID 19. Izere ịgbanahụ obi nkoropụ, ọtụtụ n'ime anyị agbabawo na ihe ọmụma , mụta ihe ọhụrụ - ọbụlagodi site na weebụ - nke bụ isi iyi nke ihe onwunwe. Nke ahụ bụ isi okwu dị mma maka nyiwe dịka Geopois, Udemy, Simpliv ma ọ bụ Coursera.
Site na ekele anyị na Geofumadas.
Na nkenke, Geopois bụ echiche na-adọrọ mmasị, na-ejikọ ọnọdụ ndị nwere ike ịkọwapụta nke a dabere na ntinye ọdịnaya, mmekorita na ohere azụmaahịa. N'oge dị mma maka gburugburu ụwa nke na-etinyekwu ụbọchị ọ bụla n'ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ihe niile anyị na-eme ná ndụ anyị na-adị kwa ụbọchị. Anyị na-akwado ileta ha na weebụ Geopois.com, LinkedInma Twitter. Daalụ Javier na Silvana nke ukwuu maka ịnata Geofumadas. Ruo oge ọzọ.
Previous Post«Previous Vexel eweputara UltraCam Osprey 4.1
Next Post Scotland sonyere na Nkwekọrịta Ọha na mpaghara GeospatialNext »